Ma ubaahan tahay in aad ogaato in Gacalisadaada ay Rag kale kula Shukaansato? | Calafka.net	Thursday, April 24th, 2014	Home
Ma ubaahan tahay in aad ogaato in Gacalisadaada ay Rag kale kula Shukaansato?
Dec 28, 2012 - 5 Jawaabood	ShareLamaanayaal fara Badan ayeey Caqabadi ka heysataa Sidii ay ku Ogaan lahaayen in Lamaantooda ay qalbiga ku Kaliyeysay iyo in ay u dhigeyso dabina jaceyl, oo Haadaan Lagaga ridiyo, iyada oo marka uu qofkaasi lajooga ay u muujineyso in nafteeda uu leeyahay kaligiis, qalbigana ay u hibeysay xili hor.
Waxaa macquul ah in uu ku yiraahdo hebel adaa ka fiican isaga waxba nooma keeno ,kadibna ku dheh yaawayay hebel iyaga ayaa ku sheegi doona sidaas ayaadna ku ogaan doontaa
Sucdi abdi hilowle says:	December 29, 2012 at 12:04 pm	Kkkkkkkk lkn kan ka foog seebaaa wax ku garani karaaaa
Reply »	Qanciso says:	December 31, 2012 at 8:34 pm	K.k.k.k.k.k. Baxar shulug lkn waba no shegten mel carurta kadhow maba kushukansaneno hadan sxbkale damacno inan yelano
Reply »	cabdi aliii says:	February 6, 2013 at 1:30 pm	haaa waan rabaaa ee sidaeeeeeee
Reply »	xasan yare says:	February 10, 2013 at 9:11 am	hadaba carurta wa ina tix galina
Reply »	fadxi says:	July 12, 2013 at 10:43 am	Kkkk wd mhd san tihiin